Sidni (Ingiriis: Sydney) waa caasimada gobolka New South Wales, waana magaalada ugu dadka tirada badan dalka Australia.
Sydney (/ sɪdni / (Ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya)) waa caasimadda gobolka ee New South Wales iyo magaalada ugu badan ee Australia iyo Oceania. Waxaa ku yaala xeebta bariga Australia, magaaladuna waxay ku ag taala Port Jackson waxayna ku dabooshaa qiyaastii 70 km (43.5 mi) oo ku taala xeebta bari ee galbeedka, Hawkesbury ilaa waqooyiga, iyo Macarthur xagga koonfureed. Sydney wuxuu ka kooban yahay 658 xaafad, 40 degmo oo maxali ah iyo 15 gobol oo isku xiga. Dadka deggan magaalada ayaa loo yaqaan "Sydneysiders". Laga soo bilaabo Juun 2017, dadka reer magaalo ee Sydney waxay ahaayeen 5,131,326.
Australiyaanka asaliga ah ee Australiyaanka ah waxay daggan yihiin aagga Sydney ugu yaraan 30,000 oo sano, waana mid ka mid ah kuwa ugu qanisan Australiya marka la eego goobaha qaxoontiga Aborijiniska, oo leh kumanaan sawir oo ku yaal gobolka oo dhan. Sanadkii 1770-kii, intii uu safarkiisa ugu horreeyay ee Pacific-ga, James Cook wuxuu soo degay Sydney, halkaas oo uu sheeganayey inuu haysto xeebta bari ee Australia ee British Crown, oo magaciisa ku qoray "New South Wales". Sanadkii 1788, Filimkii ugu horreeyay ee dembiilayaasha, oo ay hoggaamiso Arthur Phillip, ayaa timid Botany Bay si Sydney u hesho Sydney oo ah gumeysi Ingiriis ah, oo ah degsiimada ugu horreysa Yurub ee Australia. Phillip ayaa ku magacawday magaalada "Sydney" aqoonsiga Thomas Townshend, 1st Viscount Sydney. Gaadiidka ciqaabta ee New South Wales ayaa la soo gabagabeeyay ka dib markii Sydney lagu darey magaalo 1842. Dhibaatada dahabku waxay ka dhacdey xaafadda 1851, qarnigii ku xigana, Sydney waxay ka beddeshay gogol xaareyn xarun weyn oo dhaqaale iyo dhaqaale oo caalami ah. Kadib Dagaalkii Dunida II, waxay la kulmeen guuritaan ballaaran waxayna noqotay mid ka mid ah magaalooyinka dhaqamada ugu badan adduunka. Xilligii tirakoobkii 2011, in ka badan 250 luqadood oo kala duwan ayaa laga hadlay Sydney. Boqolkiiba 40 dadka degani waxay ku hadlaan luqad aan Ingiriis ahayn guriga. Intaa waxaa dheer, 36% dadweynaha ayaa sheegay in ay ku dhasheen dibadda.
The Sydney region includes coastal features of cliffs, beaches, estuaries and deep river valleys known as rias.
Inkasta oo ay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan adduunka, Qiimaynta Tayada Nololeed ee 2018 ee Sydney waxay ku taallaa Sydney tobanaad adduunka iyadoo tayada nolosha, sameynta mid ka mid ah magaalooyinka ugu nool. Waxaa lagu qeexay sida Magaalada Alpha World by Globalization iyo Shabakadaha Cilmi Baarista Adduunka, taas oo muujineysa saameynta gobolka iyo adduunka oo dhan. Sydney waxay leedahay dhaqaale suuq ah oo leh awoodda maaliyadda, wax soo saarka iyo dalxiiska. Waxaa jira dareen badan oo ka mid ah bangiyada ajnabiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee Sydney iyo magaalada waxaa loo dallacayaa mid ka mid ah xarumaha maaliyadeed ee ugu weyn Asia Pacific. Waxa la aasaasay 1850, Jaamacadda Sydney waa jaamacada koowaad ee Australia, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waawayn dunida. Sydney sidoo kale waxay ku taal guriga maktabada ugu da'da weyn Australia, Maktabadda Gobolka New South Wales, oo la furay 1826.
Sydney—A Vibrant Harbor City
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sydney&oldid=224666"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Nofeembar 2021, marka ee eheed 18:10.